चीनले पाकिस्तानलाई झनै श’क्तिशाली बनायो, नयाँ दिल्लीदेखि अमेरिकासम्म त’रंगित ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/चीनले पाकिस्तानलाई झनै श’क्तिशाली बनायो, नयाँ दिल्लीदेखि अमेरिकासम्म त’रंगित !
काठमाडौं। चीनले आफ्ना ४ सबैभन्दा अ’त्याधुनिक यु’द्धपोतमध्ये एक लञ्च गरेको छ । यी यु’द्धपोतहरु चीनले पाकिस्तानको लागि बनाइरहेको छ । चीन र पाकिस्तानको यो कदमले नयाँ दिल्लीदेखि अमेरिकासम्म त’रंगित भएका छन् ।चीन र पाकिस्तानबीच र’क्षा उपकरणको सहकार्य यस्तो बेलामा बढेको छ जतिबेला भारतको चीन र पाकिस्तान दुवैसँग त’नाव ब’ढेको छ । उता चीन र अमेरिकाबीच पनि त’नाव उत्कर्षमा छ र भारतलाई अमेरिकाले दक्षिण एसियामा आफ्नो ब’लियो सहयोगीको रुपमा हेरेको छ ।
भ्वाइस अफ अमेरिकाको रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानको नौ’सेनाले आइतबार चीनको सरकारी शि’पयार्ड हु’डोंग जों’गुआले टा’इप ०५४ एपी यु’द्धपोतको ल’ञ्चिङ कार्यक्रम आयोजना गरेको बताएको छ । पाकिस्तानी नौ’सेनाले यी यु’द्धपोतबाट आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । नौ’सेनाको बयानमा यु’द्धपोतको लागतबारे केही बताइएको छैन । मिडिया रिपोर्टका अनुसार एउटा यु’द्धपोतको लागत ३५० मिलियन डलरभन्दा बढी पर्ने दा’वी गरिएको छ ।पाकिस्तानी सेनाका अनुसार यी जहाज पाकिस्तानी नौ’सेनाका सबैभन्दा आधुनिक र ठूला जहाजमध्ये एक हुनेछन् र भविष्यका चु’नौतीहरुसँग जु’ध्न सहयोग गर्नेछन् ।
चीनले पाकिस्तानलाई २०२१ सम्म चारवटै यु’द्धपात सुम्पिनेछ । चिनियाँ मिडिया रिपोर्टअनुसार यी ४ यु’द्धपोत पाएपछि पाकिस्तानी नौसेनाको श’क्ति दो’ब्बर बढ्नेछ । पाकिस्तानी अधिकारीका अनुसार यस किसिमका यु’द्धपोत चीनको नौ’सेनाको पनि महत्वपूर्ण अंग हुन् र चीनको ज’नमुक्ति सेनाको मे’रुदण्ड मानिन्छन् । चीन र पाकिस्तान मिलेर जे’एफ १७ क’म्ब्याट ए’यरक्राफ्टसहित अन्य कैयौं सै’न्य उपकरण पनि उत्पादन गरिरहेका छन् ।केही दिनअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानको भविष्य चीनको साथमा रहेको बताएका थिए ।
चीनको पाकिस्तानसँग ब’ढ्दो नि’कटता भारतको लागि चि’न्ताको विषय हो । यसबाट पाकिस्तानका सा’मरिक महत्वका स्थलमा चीनको पहुँच बढ्नेछ जुन भारतको लागि सं’कटको स्थिति हुन सक्छ । पाकिस्तान र चीन दुवैसँग भारतको यु’द्ध भइसकेको छ ।चीनले १९६२ मा भारतमाति आ’क्रमण गरेर ल’द्दाखको ठूलो हि’स्सा क’ब्जा गरेको थियो । पाकिस्तान र भारतबीच त अहिलेसम्म पनि कश्मिरका विषयमा यु’द्ध भइरहन्छ ।अहिलेको परिस्थितिका यदि भारतको चीन वा पाकिस्तानमध्ये कुनै एकसँग त’नाव ब’ढेमा उसले दुवैको सा’मना गर्नुपर्नेछ ।
चीन र पाकिस्तानबीच सै’न्य मात्र नभइ आर्थिक साझोदारी पनि ब’लियो भएको छ । पाकिस्तान चीनको बे’ल्ट एण्ड रो’ड इ’निसिएटिभमा सहभागी छ । अर्कोतर्फ चीनले चाइना पाकिस्तान इ’कोनोमिक करिडोरको लागि ३० अर्ब डलर लगानी गरिसकेको छ ।चीनले पाकिस्तानमा सडक, ब’न्दरगाह र पा’वर प्ला’न्ट निर्माण गरिरहेको छ । यसले भारतमात्र नभइ पश्चिमी देशहरुको पनि चि’न्ता बढाएको छ ।